မနောက်ကောင်းဘူးနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မနောက်ကောင်းဘူးနော်
Posted by ဆူး on Jul 9, 2011 in Drama, Essays.. | 23 comments
ဆူး စိတ်ကူး မနောက်ကောင်းဘူးနော်
အလှူကိစ္စ တခုနဲ့ နယ်ဘက်ကို ခရီးထွက်သွားတော့ အမျိုးတွေကလည်း ရှိပြန်တော့ ဧည်သည် သွားလုပ်ပြီး စကားလေး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် မတွေ့ရတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း စုံနေအောင် စမြုံပြန်နေကြတာပေါ့။ အဲဒီ အိမ်ရဲ့ ဘေးကပ်ရပ်က သင်္ကန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တဆိုင် ဖြစ်နေတဲ့ အပြင် ထိုဆိုင်နဲ့ နှစ်အိမ် တစ်အိမ်လို ဖြစ်နေကြပါတယ်။ နယ်မှာ နေတဲ့ လူတွေ တော်တော် များများ က ထိုကဲ့သို့ ဖော်ရွေပြီး အချင်းချင်း ရိုင်းပင်း ကူညီတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စကားထိုင်ပြောပြီးနေတုန်း စကားဆူဆူညံညံ ကြားတော့ ထပြီး သွားကြည့်လိုက်ကြတယ်။
ဟဲ့… ဟဲ့.. ဘာဖြစ်တာလဲ.. အပြေးသွားကြည့်တော့..
ဘေးနားက သင်္ကန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ဘုန်းကြီး တပါး အသက် ၄၅ ၅၀ ၀န်းကျင် ရှိမယ် ထင်တယ် ပွဲကြမ်းနေတာ မြင်မိပါတယ်။
ပုံစံကတော့ ခပ်ရိုးရိုးပါပဲ အလွန်တရာ ဒေါသထွက်လာပြီး ပြောနေတာလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
နောက်တော့ ဘာများ ဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး နားထောင်နေရင်း တခု သိလိုက်တာ တခုက ဘုန်းကြီးကို သင်္ကန်း ညာရောင်းတယ် ထင်ပြီး လာဆူ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကန်းကို ညာရောင်းတယ် ဘာညာ စသဖြင့် ဆူ တဲ့ အခါ ဆိုင်သမားက တည်တည်တံ့တံ့ ကောင်းကောင်း ရောင်းနေတာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ပြောရတာလဲ အကြောင်းမရှိပဲ ဒီလို ပြောရကောင်းလား ဆိုပြီး စိတ်တွေ ဆိုးပြန်ပါရောကွယ်.. ဘုန်းကြီးက လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ အထုတ်တခုကို ဖွင့်ပြီးတော့ ရော့ ဒီမှာ ကြည့်.. ဒါ မင်းတို့ဆီက ၀ယ်ထားတဲ့ သင်္ကန်း မဟုတ်လား…
ဆိုင်သမားက.. သေချာ ကြည့်လိုက်ပြီး.. ဟုတ်ပါတယ် ဒါ ကျနော်တို့ ဆိုင်က ဒီအမျိုးအစား ရောင်းပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ.. မဟုတ်တာ မတရားတာတော့ မစွပ်စွဲပါနဲ့ ခင်ဗျာ..
ဘုန်းကြီးက.. အေး.. ဒါမင်းတို့ ဆိုင်က ၀ယ်ထားတာ မှန်တယ် ဆိုလို့ ငါက ဒီလို ပြောရတာ။ တနေ့က ငါ့ ဒကာ တယောက်က အလှူမှာ သင်္ကန်းကပ်ချင်လို့ မင်းတို့ ဆိုင်က သင်္ကန်းဝယ်ပြီး အလှူရက် မရောက်သေးလို့ ငါ့ကျောင်းမှာ လာထားတာ.. ဒကာက မင်းတို့ ဆိုင်က ဈေးအကြီးဆုံး အကောင်းဆုံး သင်္ကန်း ဆိုပြီး သေချာ ၀ယ်လာရဲ့သားနဲ့ အခုတော့ မင်းတို့ ဒီလို လိမ်ရလား.. ငါကို အတု ထည့်ပေးရလား..
ဆိုင်ရှင်က.. တနေ့က လူတယောက် လာဝယ်သွားတဲ့ သင်္ကန်းလား သူက မေးတယ် ဒီဆိုင်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး သင်္ကန်း ဘာရှိလဲ ဆိုပြီး အကောင်းဆုံးဟာ ၀ယ်သွားတာပါ။ ဘာလို့ အတုလို့ ပြောတာလဲ ပစ္စည်းနဲ့ နာမည်လည်း မမှားဘူး အတုဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ..
ဘုန်းကြီးက.. အတုဆိုတာ သေချာလို့ ပြောတာပါ. ငါ့ကျောင်းကို ရန်ကုန်က လာတဲ့ ဦးဇင်းလေးက သင်္ကန်းကို ကြည့်ပြီး အတုကြီး လို့ သေချာ ပြောသွားတယ် ရန်ကုန်မှာဆို ဒီလို သင်္ကန်းမျိုး ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ အရေးမလုပ်ပဲ ချောင်ထိုးထားတာ… ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဒါ အတုပဲ.. နင်တို့ ဆိုင်က မတော်မတရား သူများ ပိုက်ဆံ ညာယူတယ်။
ဆိုင်ရှင် က တော်တော် စိတ်တိုနေပါပြီ… စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့.. ဦးဇင်း အတုလို့ ဒီလောက် ပြောနေမှတော့ အတုလို့ ပြောတဲ့ ဦးဇင်း ကို ခေါ်လာခဲ့ပါ သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် ဘာကို အတုလို့ ပြောတာလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းကျောင်းက ဘယ်မှာလဲ။
ဘုန်းကြီးက.. ကျုပ်ကျောင်းက စမ်းမြိုင်လေးရွာကပါ။ အခုဒီကလို လာဖို့ လှေကို ချောင်းရိုး အတိုင်း ၃နာရီလောက် စီးလာရတာ..အဲဒီ ဦးဇင်းက တည အိပ်ပြီး ပြန်သွားပြီ အခုလည်း မရှိတော့ဘူး။
ကျုပ်ကို မသွားခင် သေချာ ပြောသွားတယ် သင်္ကန်း အတုကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း.. ရန်ကုန်က လာတဲ့ ဦးဇင်း ဒါမျိုး ပြောတာ မှားစရာ မရှိဘူး။
ဆိုင်ရှင်က တဆိုင်လုံးမှာ ရှိသမျှ သင်္ကန်းများ ထုပ်ပြီး နာမည်တူ ပစ္စည်းတူ များကိုလည်း ပြလိုက်သည်။ ထိုဦးဇင်းနည်းနည်း အံသြသွားပြီး လေသံပျော့သွားသည်။
ထို့နောက် ဆိုင်ရှင်က ဦးဇင်း ဒီသင်္ကန်းကို အတုလို့ ဒီတိုင်းစွပ်စွဲနေမယ် ဆိုရင်တော့ ဦးဇင်းနဲ့ အတူ ဒီမြို့က နာမည်ကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၀ကျောင်းကို တပည့်တော်နဲ့ အတူသွားပြီး ဒီသင်္ကန်း ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ချောင်ထိုးခံရတဲ့ သင်္ကန်းလား ပစ္စည်းနဲ့ နာမည် မှန်သလား လိုက်မေးပေးမယ် တကယ်လို့ တကျောင်းက မဟုတ်ဘူး ဖြေခဲ့ရင် ၁၀သိန်း ပြန်လျှော်ပေးမယ် တကယ်လို့ ကျောင်းတိုင်းက မှန်ပါတယ် အစစ် အမှန်လို့ ပြောခဲ့ရင် တပည့်တော်တို့ တရားစွဲမယ်ဆို တရားစွဲလို့ ရနေပြီနော် ဦးဇင်း ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။ ထို အချိန်မှာ ဒေါသထွက်ပြီး လာပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးလည်း နည်းနည်း တွေဝေ သွားတယ်။ ထို့နောက် ဦးဇင်းက တောသားဗျ.. ဒါမျိုး ပစ္စည်း မြင်တောင် မြင်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး.. ကျုပ်ကို အလှူမှာ ကပ်မဲ့ သင်္ကန်း ရန်ကုန်က လာတဲ့ ဦးဇင်းကို ထုတ်ပြတာ သူက အတုကြီး ဆိုတော့ ဈေးကြီးပေးပြီး သေချာ ၀ယ်လာတဲ့ သင်္ကန်းက အတုကြီး ချောင်ထိုးခံရတဲ့ အသားဖြစ်နေတယ် ပြောတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားလို့ပါ။ ဒကာတို့ ဆိုင်က မှန်တယ် ဆိုရင်တော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး။ ကိုင်း ဒါဆိုလည်း ဦးဇင်း သွားမယ် ဗျ.. ဆိုပြီး ပြောပြီး ဆိုင်ထဲမှ ထွက်ခွာ သွားလေသည်။
ထို ဘုန်းကြီး ဆိုင်က ထွက်သွားမှ ပြန်တွေးမိလိုက်တာ တခုရှိပါတယ်.. ဒါကတော့ ပစ္စည်းလေးပါး ရှားပါး လွန်းတဲ့ အတွက် အကောင်းမှန်း အညံ့မှန်း အတုမှန်း မသိဖြစ်နေတာလို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။
ဒါပဲပေါ့ ။ အခုလို ဦးဦးဖျားဖျားလေး လင့်ခ်လေးပေးလာလို့ 
ဘုန်းကြီး ပါစေ အသက်ရှည်စေ
အားလုံး စိတ်ဓါတ်ကျန်းမာ ပါစေ ဖွားဆူးလေး တစ်ယောက်
အတုမိတဲ့ အတွေ့အကြုံများတဲ့ ရန်ကုန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး သေချာမကြည့်ပဲ ရမ်းတုတ်လိုက်တာကို ရိုးလွန်းတဲ့ တောဘုန်းကြီးက တကယ်ယုံသွားတာပေါ့ …
ကြားထဲက သင်္ကန်းဆိုင် အလုပ်ရှုပ်သွားတာ …
ဆူးေ၇ တခါက အိမ်မှာ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ အဲ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ လူက လာပြောတယ် သင်္ကန်းဝယ်ပြီးပလားတဲ့ မ၀ယ်ရသေးရင် ကျောင်းက သင်္ကန်းကို ပြန်ဝယ်ပြီး လှုပါလားလို့ ပြောတယ်။ ကျောင်းမှာ သင်္ကန်းတွေပုံနေလို့ပါတဲ့။ ကိုယ်က ၀ယ်ပြီးသားမို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်နှစ်တွေကြမှပဲ ပြန်ဝယ်ပြီး ပြန်လှုပါ့မယ် ပြောလိုက်ရတယ်။ ပေါတဲ့ကျောင်းကတော့ အပုံလိုက် အတော်ပေါတာ။ သိတဲ့အတိုင်း ရေများရာ မိုးရွာကြတာလေ။
မမှီ ပြောသလိုပါပဲ.. မိုးက နေရာတိုင်း မျှမျှ တတ မရွာတော့ အကောင်းမှန်း အဆိုးမှန်း သေချာတောင် မသိဘူး ထင်ပါတယ်။
ခပ်ရိုးရိုး ဆိုတော့ အဲလိုတွေ ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်မယ်။
အညာမိတဲ့ အညာသား ဆိုတဲ့ စကား အဲဒီကနေ စတာ ထင်တယ်။
ဒီပို့ စ်ဖတ်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က တစ်မျက်နှာဝတ္ထုတိုတစ်ခုက်ိုပြန်အမှတ်ရမိတယ်
လူတစ်ယောက် အရက်ဆိုင်သွားပြီး ဘလက်လေဘယ်သွားဝယ်တော့
ရောင်းတဲ့ကောင်လေးကို “ပစ္စည်းအစစ်ဘဲလိုချင်တယ် ပိုက်ဆံပိုပေးရလည်းကိစ္စမရှိဘူး”လို့ ပြောဝယ်တယ်..
ဝယ်ဝယ်ပြီးချင်း မြည်းကြည့်တော့ အရင်သောက်ဖူးတဲ့ အနံ့ အရသာနဲ့ မတူတာကြောင့်
“ငါသောက်ဖူးတာနဲ့ အနံ့ အရသာမတူဘူး ဒါအတုဘဲ မင်းငါ့ကိုလိမ်ရောင်းတယ်.. မင်းသူဌေးနဲ့ ငါ စကားပြောမယ်” ဆိုတာကြောင့် သူဌေးထွက်လာပြီး “ဘယ်လိုကြောင့် အတုလို့ ဆိုရတာတုန်းလို့ ” မေးတော့
“ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ငါ့ကို ဘလက်လေဘယ်အစစ်ဆိုတာတိုက်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ဆိုင်က အရသာနဲ့ မတူတာကြောင့် မင်းတို့ အရက်ဟာအတုဘဲ” လို့ ဇွတ်ပြောပါလေရော
သူဌေးလည်း ချက်ဆို နားခွက်ကမီးတောက်တာကြောင့်
သူ့ အလုပ်သမားကို မာန်မဲဟန်ဆောင်ပြီး အရက်အတုကို (မျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ပြပြီး) သွားယူခိုင်းလိုက်တယ် ပြီးတော့သူဌေးက
“ဘော့စ်.. ဆောရီး ကျွန်တော့်အလုပ်သမားလေးရဲ့ အမှားကိုခွင့််လွှတ်ပေးပါ.. ဒီပုလင်းကတော့ အစစ်ပါ
စမ်းသောက်ကြည့်ပါဦး” ဆိုတော့ ကိုယ်တော်ချောလည်း သောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ အလျင်သူငယ်ချင်းတွေတိုက်တာနဲ့ အနံ့ အရသာတူတာကြောင့်
“ဒါမှ အစစ်ကွ..” လို့ ဆိုပါလေရော.. ဒီတော့သူဌေးက
“ဘော့စ်.. ဒီပုလင်းက အစစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးပိုပေးရမယ်” ဆိုတာကြောင့်
တကယ့် အတုကို အစစ်ထင်ပြီး ပိုက်ဆံပိုပေးခဲ့ရတဲ့ မိအေးနှစ်ခါနာဝတ္ထုတိုလေးပါ
ဖတ်တာက MG ကရွာသားတွေ
တချို့လူတွေက ပစ္စည်းဝယ်ရင် သိပ်ကြည့်တတ်တယ်။ တချို့ကတော့ မကြည့်တတ်တော့ စိတ်ချရတဲ့ဆိုင်မှာပဲ ၀ယ်ကြတယ်။
မနေ့ကတည်းက မန်းထားတာကို မတွေ့တာ.. အဲရာ တက်တဲ့ အချိန် မန်းလိုက်တာလား မသိဘူး
တခုခုတော့ မှားနေပြီ။ မှားတယ်ဆိုတာ မမှန်လို့၊ မမှန်တာ မကောင်းဘူး၊ မကောင်းတာ အကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဆို အပါယ်လား၊ အပါယ်လားရင် အပါးလယ်၊ အပါးလယ်တော့ အထူအ၊ အထူအတော့ သူမရ၊ သူမရတော့ စိတ်ဆိုး၊ စိတ်ဆိုးရင် အကုသိုလ်ဖြစ်၊ အကုသိုလ်ဆို အပါယ်လား၊ အပါယ်လားတော့…. အမယ်လေး ကယ်ကြပါအုံး၊ ရပ်လို့မရတော့ဘူး၊ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်သွားဘီ….
ကိုကြောင်ကို ကျွန်တော်အငြိမ်.ထောင်ပြီးရင် လူရွှင်တော် လုပ်ခိုင်းမယ်ဗျာ
ဒါဆို ကိုယ်တော်က ဘာကြီးလဲမသိဘူးနော်။
တစ်ခါက သိမ်ကြီးဈေး ဂုံးကျော် တံတားပေါ်မှာ ကျောက်ခတ်ပင်လေးတွေရောင်းနေတာ အမြစ်ကလေးတွေ ဖွေးလို့ မြေကြီးသားကလေးလဲပါသေး တစ်ပင် ၂၅ ကျပ် (ငယ်ငယ်ကပါ) ၁၀၀ ဖိုး ၅ ပင်တဲ့ အိမ်မှာစိုက်မယ်ပေါ့ ၀ယ်လာခဲ့တာ အိမ်ရောက်တော့ အိုးတွေဝယ်ပြီးခါမှ.. အပင်လေးတွေက ကြည့်လိုက်တာ အတု မိလာတယ်…… အခတ်ကလေးချိုးပြီး ဘယ်က အမြစ်နဲ့လဲမသိဘူး အဲဒီအမြစ်နဲ့ကပ် အပ်ခြည်ကြိုးနဲ့ချည် မြေကြီးသားလေအုံ ငှက်ပျော်ရွက်နဲ့ပတ် ပန်းပင်အတု လုပ်ရောင်းတာ ပြောပါတယ်… ခံထားရဘူးတဲ့သူကတော့ နောက်တစ်ခါ ခံရမှာကြောက်နေမှာပေါ့ …… နောက်တခါများကြုံရင် ပြောပြပေးပါ.. အဲဒီလို ပုံစံမျိုးထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒေါသ မထွက်ပါနဲ့လို့..တောသူတောင်သားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ…………
တညင်သားမှန်းသိလို့ ညာလိုက်တာ ဖြစ်မယ် အဟီး
နယ်ကဘုန်းကြီးက သင်္ကန်းအတုနဲ့ အစစ်မသိလို့ထင်တယ်
ချုပ်ပုံချုပ်နည်းက ၀ိနည်းနဲ့ မညီတာကိုပြောတာလား…??
တညင်သားရေးတဲ့ ကျောက်ခက်ပင်မျိုး ၀ယ်မိဘူးတယ်။သစ်ခွ ပန်းကို အပင်မှာဖောက်ထည့်တာ၊
စပယ်ရိုးရိုးကို သွားကြားထိုးတံလေးစိုက်ပြီး စပယ် အိုးပုတ် လုပ်ရောင်းတာ။နှင်းဆီ အပွင့်ကြီးကို ရိုးရိုး နှင်းဆီပင်မှာ ကပ်တာ ၊Kiss me quick ကို လည်း အပွင့်ကြီးနဲ့ အသေးပုံမှားရိုက်တာ။
ခံရပေါင်းများပြီ။ခုထိလည်းမမှတ်သေးဘူး ၊အပင်မြင်ရင်ဝယ်ချင်တော့ လိမ်ခံနေရတုံးဘဲ။
It’s not the false of သင်္ကန်း Shop. It is the false of the two monks because since they were monks, they can’t have any option over whatever kind of brand, type of clothes that laymen donated.
သင်္ကန်းကပ်လျှင် ဘုန်းကြီးတွေက ကြိုပြောတယ် … ၀တ်မဲ့ သင်္ကန်းဘယ်နှစ်စုံလိုတယ် …ရောင်းဖို့ သင်္ကန်း ဘယ်နှစ်စုံဆိုပြီးတော့ပေါ့ … ။
တချို့ တရားကျောင်းတွေမှာ သင်္ကန်းတစုံ လေးငါးထောင်လောက်နဲ့ ၀ယ် (တရားကျောင်းကရောင်းတာ ) ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကို ပြန်ကပ်လို့ ရတယ် … ။ သင်္ကန်းတွေကိုတော့ … နောက်နှစ်တခါ အဲ့လို လုပ်လို့ရအောင် မ၀တ်ပဲ ပြန်သိမ်းထားတယ် … ၀တ်လို့ကလည်း အရေသွေးမကောင်းဘူးလို့ ဘုန်းကြီးတွေ ပြောကြပါတယ် … ။ သင်္ကန်းကပ်တယ်ဆိုတာပဲ စတိလုပ်တာပါ … သင်္ကန်တစုံစာ လေးငါးထောင်ကို ပိုက်ဆံနဲ့ လဲယူတာပေါ့ .. ။
၀တ်ဖို့ သင်္ကန်းလိုတယ်ဆိုလျှင်တော့ တကယ့်ကို သူတို့ ၀တ်မှာ မို့လို့ …. ဈေးမြင့်တာလေး ၀ယ်လှူရတယ် … ။ သရီးရိုင်ဖယ် အစနဲ့ ချုပ်တဲ့ သင်္ကန်းဆိုလျှင် တစ်စုံကို နှစ်သောင်းခွဲနဲ့ သုံးသောင်းကြားမှာ ရှိတယ် … ။ အလှူရှင်မရှိလို့ အသင့်တင့် အရည်သွေး အသင့်တင်ပဲ ၀တ် နိုင်တဲ့ သံဃာတွေလည်း ရှိတယ် ။
သင်္ကန်း အဟောင်းတွေကို ပါကင် ကောင်းကောင်း နဲ့ ပြန်ထဲ့ ပြီး ညာရောင်း တာတွေရှိတယ်။ အတု တွေကို အစစ်နဲ့ ညှပ် ရောင်းတာ တွေလဲရှိ တယ်။ ပစ္စည်း အစစ် ကိုပြပြီးမှ ငွေချေ ပြိးတဲ့အခါ အတု( အဟောင်း၊) မျက်လှည့်ပြ ထည့်ပေးလိုက်တာတွေ လဲရှိတယ်။ ကြားလဲ ကြားဖူးတယ်။ အသိတွေ ထိလာတာလဲရှိတယ်။ တစ်ခြား ပစ္စည်း တွေမှာ၊ အ၀တ်အထည် ထီး၊ စတာတွေမှာ လဲ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ ခံ ခဲ့ရဘူးတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဒီမြေမှာ အများကြီး ။
လူတိုင်းက ရိုးရိုးသားစား စီးပွားရှာကြရင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့.. ဘာလို့များ မသမာတဲ့ နည်းတွေနဲ့ စီးပွားရှာနေကြလဲ မသိတော့ဘူး။ တခုတော့ တွေးမိတာ ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ဈေးဝယ်ရင် ခေါ်ဈေးက ဆစ်မှ ရတယ် ဆိုပြီး ဂိုက်တွေက မှာတတ်တယ်.. ၁၀၀ ဆိုရင် ၂၀ လောက်ပေးပြီး ဆစ်ရင် ရတာပဲ ဆိုတော့ ဆစ်ကြတယ်.. နောက် ဆစ်တဲ့ အတိုင်းရလာတယ်.. တစ်ရာဖိုး ၅ထည် ဆိုပါတော့.. ၅ရာဖိုး ၂၅ ထည် ရမဲ့ဟာ မသိမသာ နဲ့ ၅ထည်လောက် လျော့ပြီး ပျမ်းမျှ တွက်ပြီး ဈေးမလျော့ရတဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်တာတွေ ကြုံဖူးတယ်။ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူ အတင်းကာရော မတရား ဆစ်လို့ လုပ်တာလား ရောင်းသူကပဲ မသာမာ လို့ပဲ.. လောဘဇောတွေ တိုက်နေတာလား တခုခုတော့ တခုခုပဲ..
ဘ၀မှာ ရှင်သန်နေတဲ့ ကာလပတ်လုံး ရိုးသားစွာ အသက်မွေးရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကစက်ရုံတရုံမှာပစ္စည်းအော်ဒါမှာတယ်၊ ဘယ်မှာဖြန့် မှာလည်းလို့ မေးတယ်၊မြန်မာပြည်မှာလို့ ဖြေတယ်၊ဒါဆို အရည်အသွေးကိုဘယ်လိုလျှော့မလဲလို့ သူကမေးတယ်၊ဘာကြောင့်ဒီလိုမေးတာလည်းလို့ ဆိုတော့…သူက…မြန်မာအဝယ်တော်တွေလာရင် အရည်အသွေးရောဈေးပါလျှော့ခိုင်းတတ်လို့ ပါလို့ ဖြေတယ်၊ဘယ်သူ့ ကိုစိတ်ဆိုးရမလည်း၊အခံရခတ်တယ်။